दुधालु गोरु हेर्न आउनेको लर्को अझै घटेन ! - Everest Dainik - News from Nepal
दुधालु गोरु हेर्न आउनेको लर्को अझै घटेन !
सिन्धुपाल्चोक, असोज २१ । पहिले कहींकतै नदेखेको-नसुनेको दूध दिने गोरु हेर्न आउनेको लर्को अझै घटेको छैन । हेलम्बु गाउँपालिका इचोक पुरानागाउँस्थित दुधालु गोरु हेर्न आउनेहरुका लागि सेवा दिन र गोरुको संरक्षणका लागि गाउँपालिका आफैं जुटेको छ ।
पुरानागाउँमै गोरुका लागि घाँसपात, दानापानीको सम्पूर्ण खर्च गाउँपालिकाले व्यहोरिरहेको हेलम्बु गाउँपालिकाका प्रमुख निमाग्याल्जेन शेर्पाले बताए । दूधको थप ल्याब टेस्ट गर्न बाहिरी देश पठाउने तयारी गरिरहेका छौ, शेर्पाले भने, ‘दुधालु गोरुले सिन्धुपाल्चोकलाई चिनायो, त्यसको संरक्षणमा हामी लाग्नुपर्छ ।‘ हाल गाउँपालिकाले दूध दिने गोरुसँगै शिवमन्दिर निर्माण कार्ययोजना बनाइरहेको छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।
याे पनि पढ्नुस सिन्धुपाल्चोकमा राणा झिनो मतले अगाडि, तामाङ मतान्तर घटाउदै
ट्याग्स: Dhudhalu goru, sindhupalchok